Farmaajo oo ku tuntay nidaamka 4.5 - (Isku dhex-yaac) | KEYDMEDIA ONLINE
Farmaajo oo ku tuntay nidaamka 4.5 - (Isku dhex-yaac)
Farmaajo, oo walwal iyo isku-dhex-yaal siyaasadeed galay, ayaa beel ka mid ah beelaha Soomaaliyeed, ku wareejiyay amniga dalka, halka uu guud ahaan maamulka Madaxtooyada Qaran-kana farta ka saaray beel kale.
MUQDISHO, Soomaaliya – Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Maxamed Cabdullahi Farmaajo, ayaa si toos ah ugu tuntay nidaamka 4.5 ee Soomaalidu xalka u aragtay, kuna heshiisay in lagu qeybsado awoodda Dowladda inta laga gaarayo doorasho (Qof iyo Cod ah), kadib markii uu xalay sameeyay magacaabis xilal cusub oo aan sharciga waafaqsaneyn.
Farmaajo oo ka cararaya in Fahad Yaasiin iyo Yaasiin Farey, la hor geeyo Maxakamadda, si loogu qaado dacwada eedda la xariirta kiiska Ikraan Tahliil, ayaa Taliyaha Hay’adda Nabad-sugidda iyo Sirdoonka Qaranka u magacaabay Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud (Farey), taas oo ka dhigan, in hal beel (Abgaal) ay ka soo wadajeedaan, Wasiirka Amniga Soomaaliya, Xasan Xundubey Jimcaale, Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka, General Odawaa Yuusuf Raage, iyo Taliyaha Nabad-sugidda ee uu xalay magacaabay.
Sidoo kale, eedeysane, Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, ayuu u magacaabay la taliyaha Amniga Madaxweynaha waqtigiisu idlaaday, taas oo iyana la micno ah, in Wasiiru Dowlaha Madaxtooyada Soomaaliya Xasan Macallin Khaliif, Agaasime ku xigeynka Madaxtooyada Cabdinuur Maxamed Axmed, iyo Fahad-ka eedeysan ee uu xalay magacaabay oo dhamaantood ay shaqadoodu tahay Villa Soomaaliya ay ka soo jeedaan beesha Reer Ow-Xasan.
Su’aasha ay shacabku is weydiinayaan ayaa ah, marba haddii uu Farmaajo go’aansaday inuu qaado tallaabooyinka qar-iska-tuurnimo, muxuu u ilaalin waayay nidaanka lagu heshiisay, sideese ku go’aansaday inuu hal beel u dhiibo amniga dalka, halka beel kana u dhiibay guud ahaan maamulka Madaxtooyada?
Sida uu qabo sharciga dalka u yaalla, ma jiro qodob Madaxweynihii hore u ogolaanaya inuu sameeyo magacaabis iyo xil ka qaadis labadaba, waxaana taas sii dheer inuu guud ahaan amniga iyo hoggaanka doorashooyinka dalka uu 1-dii May ku wareejiyay RW Rooble, taas oo ka dhigan in guud ahaan tallaabooyinka, is-miidaaminta siyaasadeed ah ee uu qaaday Farmaajo ay yihiin ku baal-marsan dastuurka dalka u yaalla.